Waxqabadka Dawladda ee isbuucii la soo dhaafay – XAMAR POST
Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin:
Golaha Wasiirada oo Ansixiyey Hindise Sharciyeedka Istaatiistikada
Wasiirka Wasaarada Qorsheynta ayaa golaha wasiirada 24kii August 2017 u soo bandhigay Hindise Sharciyeedka Istaatiistikada oo dood dheer ka dib ay xubnaha Golaha Wasiirada si wadar-oggol ah ugu codeeyeen una ansixiyeen. Sharcigan ayaa waxaa ka abuurmaya Hay’ada Istaatiistikada Qaranka oo wax weyn ka qaban doonta arrimaha muhiimka u ah diyaarinta Qorsheyaasha horumarinta dalka, iyo arrimo fara badan.
Aqalka Sare Oo Ansixiyey Sharciga Isgaarsiinta
Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay Sharciga Isgaarsiinta dalka oo dhowaan Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyada hor geysay golahaas kadib markuu ka soo gudbay Golaha Shacabka. Sharcigan ayaa xilibaanada Aqalka Sare ku ansixiyeen 39 mudane. Sharcigan ayaa waxa uu muhiim u yahay sidii lagu hagi lahaa isgaarsiinta ka jirta waddanka guud ahaan. Waxa uuna dhaqan galayaa ka dib marka uu madaxweynaha saxiixo
Ra’Iisal Wasaaraha Soomaaliya Oo Beesha Caalamka kula dardaarmay dardargelinta mashaariicda dib u dhiska dalka si dhalinyarada shaqo abuur loogu sameeyo.
23/08/2017 ayaa Ra’iisal wasaaraaha Xukuumadda Xasan Cali Kheyre kulan la qaatay wakiilada Beesha Caalamka. Kulankan oo ujeedadiisu ahaa inuu warbixin ka siiyo xaaladda dalka, isla markaana la sii xoojiyo iskaashiga dhinacyada badan ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo dalalka iyo Hay’adaha uu la kulmay Safiiradooda. Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in loo baahanyahay sii xoojinta horumarka ballaaran ee jira, dowladana ay dooneyso inay shaqo abuur u sameyso dhalinyarada, loona baahanyahay inaan si deg-deg ah u hirgelino mashaariicda dib u dhiska dalka. Ra’iisal wasaaraha ayaa diiradda saaray warbixinada ku aaddan Gurmadka Abaaraha, Amniga, Dhaqaalaha, la dagaalanka Musuqa iyo sidii bulshada Soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa nidaam dawladnimo ee hufan.
Ra’iisul Wasaaraha oo magacaabay Wasiirka Howlaha Guud Iyo Dib u Dhiska
22/08/2014 ayaa xilka Wasiirka Howlaha Guud iyo dib u dhiska loo magacaabay mudane Eng. Saadiq Cabdulaahi Cabdi, xilkan ayaa bannaanaa in muddo ah ka dib markii la dilay Wasiirkii hore ee Wasaaradda. Wasiirka cusub ayaa waxaa horyaala howla muhiim ah oo horumarin ah oo loo baahan yahay inuu guda galo. Ummaddana waxay ka dhowraysaa waxqabad muuqda iyo howl dardar leh.
Maxkamadda Darajada 1aad Oo Dil Ku Xukuntay Laba Eedeysane Oo Hore Dil u Gaystay
22/08/2017 ayaa Maxkamadda darajada koowaad ee Ciidamada Qalabka-sida xukun dil ah ku riday labo eedeysane oo loo heystay inay dileen Nabadoon lagu magacaabi jiray Suldaan Hilowle Xeefow Xuseen, kaasoo ka mid ahaa ergadii soo dooratay Xildhibaanada Baarlamaanka. Labadan dembiile ee xukunka ku dhacay ayaa nabaddoonka ay ku dileen bannaanka masjid ku yaala Degmada Wadajir. Markii uu dilku dhacay ayaa ku soo baxay dembiileyaashaasi ciidanka amniga oo markii dambe gacanta ku dhigay.
Jaamicada Ummadda oo ardey ka qaaday imtixaan si ay halkaas waxbarasho uga bilaabaan
21/08/2017 ayaa Ra’iisal Wasaare Kheyre uu kormeeray xarunta jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed oo halkaasi loo fariisanayey imtixaankii oggolaanshaha ee ardayda cusub si ay uga mid noqdaan 1,000 arday oo ay Jaamacaddu qaadanaayso sanadkaan, si ay ugu biiraan arday badan oo Jamacadda ku dhigta lacag la’an oo ay dowladdu bixiso qarashaadka ku baxaya waxbarashadooda. Ra’iisul Wasaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, xubno ka tirsan Golaha Wasiirada ayaa kormeer Indha indheyn ah waxa ay ugu tageen Ardayda ku jirtay Imtixaanka ay ugu gudbayaan Jamacadda Ummadda Soomaaliyeed.
Ra’iisal wasaaraha oo shir muhiim ah la qaatay qaar ka mid ah culimada
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulan waxa uu la qaatay Culumada Soomaaliyeed oo uu kala hadlay sidii loo xoojin lahaa doorka culumada ee dib u dhiska dalka. Culimada ayaa ah kuwa door weyn ku leh hoggaaminta bulshada, Culumada Soomaaliyeed ayaa Ra’iisul Wasaaraha iyo Madaxweynaha uga mahadceliyey dhiirigelinta doorka culumada oo Guddiyada sida kan Abaaraha iyo kan Taakuleynta Ciidankaba ugu dareen. Culumada ayaa u xaqiijisay Ra’iisul Wasaaraha inay diyaar u yihiin sidii ay door hoggaamineed uga qaadan lahaayeen Bulshada isla markaasna ay diyaar u yihiin in Dowlada ay ku toosiyaan dariiqa saxa ah, isla markaasna garab istaagaan si dalka loo gaarsiiyo horumar ballaaran oo dhan walba ah.
Wasaarada Warfaafinta oo daahfurtay soo bandhigida waxqabadka horumarka Maamulka Maaliyada
Wasaarada Warfaafinta, Dhaqanka & Dalxiiska oo kaashaneysa Bankiga Adduunka ayaa soo bandhigtay waxqabadka horumarka Maamulka Maaliyada, gaar ahaan mashaariicda ay Bankiga Adduunka maalgeliso si shacabka loola socodsiiyo horumarka ballaaran ee dowladu ka gaartay maamulka iyo maareynta Maaliyada dalka. Labo cisho oo seminar ah 22kii iyo 23kii August 2017 oo lagu qabtay xarunta Wasaarada Warfaafinta ayaa diirada lagu saaray warbixintii 6 biloodlaha ahaa ee ugu danbeeyey ee (Multi-Partner Fund (MPF)). Seminar-kan ayaa waxaa ka qeybgalay dad matalaya hay’adaha dowlada iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka ah.
Heshiis ay wada saxiixdeen soomaaliya Iyo Jabuuti
18/08/2017 ayaa Wasiirrada Boostada iyo Isgaarsiinta ee dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti, Mudane Eng. Cabdi Cashur Xasan iyo Mudane Cabdi Youssouf Sougueh, si wada-jir ah u soo saaray war-murtiyeed ku saabsan waxyaabihii ay isku afgarteen labada dhinac. Ujeeddada booqashada rasmiga ah ee wasiirka iyo wafdigiisa, oo afar cisho qaadatay, ayaa ahayd sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal, gaar ahaan iskaashiga dhinacyada isgaarsiinta iyo boostada
Diyaarado duqeeyay Daacishta ku sugan Puntland